ထူးခြားဆန်းကြယ်တဲ့ နည်းလမ်းတွေ သုံးလာတဲ့ YBS ပေါ်က ခါးပိုက်နှိုက်များ (မပေါ့ဆကြပါနဲ့) – Shwe Yoe
ထူးခြားဆန်းကြယ်တဲ့ နည်းလမ်းတွေ သုံးလာတဲ့ YBS ပေါ်က ခါးပိုက်နှိုက်များ (မပေါ့ဆကြပါနဲ့)
မနေ့က မြို့ထဲက အပြန်.. YBS ကားပေါ်မှာဗျ.. ကားက အရမ်း အကျပ်ကြီး မဟုတ်ပေမယ့်.. ထိုင်ခုံနေရာတွေတော့..မရှိတော့ဘူးလေ.. ဒီတော့.. ကျတော့် ထုံစံအတိုင်း နောက်ဆုံးထိ တိုးဝင်ပြီး.. မတ်တတ်ရပ် စီးခဲ့တာပေါ့.. အဲ.. လမ်းတစ်ဝက်လောက်.. ရောက်တော့.. မှတ်တိုင် တစ်ခုကနေ.. တက်လာတဲ့ အမျိုးသားတစ်ယောက်နဲ့ အမျိုးသမီးတစ်ယောက်က ကျတော့်ရဲ့ဘေးကို လာရပ်ကြတယ်ဗျ.. အမျိုးသားက အသားညိုညို ညင်းသိုးသိုး ပုံစံနဲ့.. ဟမ်းဘတ်အိတ် တစ်လုံးကိုလည်း စလွယ်သိုင်း..လွယ်ထားသေးသဗျ.. သူ့နောက်က ပါလာတဲ့ အမျိုးသမီးကတော့.. အသက် ၄၀ ဝန်းကျင်.. အဝတ်အစား ပြောင်ပြောင်ရောင်ရောင်နဲ့ သူ့မှာလည်း..စလင်းဘတ်အိတ်ကြီး ချိုင်းကြားညှပ်လို့ ခုနက.. အမျိုးသားဘေးကို လာရပ်တာပေါ့..
ခက်တာက.. အမျိုးသမီးက ဂဏာမငြိမ်ပဲ သူ့စလင်းဘတ်အိတ်ကို.. ခဏခဏ.. ဘယ်ညာ ဘက်ပြောင်းပြီး..ညပ်နေတာပဲ.. ဒါက.. ခါးပိုက်နှိုက်ကို.. လက်ယပ် ခေါ်သလိုမျိုး ဖြစ်နေတာပေါ့.. ဒါနဲ့.. ဒီလိုပဲ..စီးလာကြရင်း တစ်နေရာ ရောက်တော့.. အမျိုးသားရှေ့..ထိုင်ခုံက.. ခရီးသည်က..ထ သွားတယ်.. ထိုင်မယ်ဆို.. အမျိုးသားက ထိုင်လို့ ရပေမယ့် သူက မထိုင်ပဲ.. ဘေးက စလင်းဘတ်နဲ့ အမျိုးသမီးကို.. ” အစ်မ..ထိုင်ပါ..”. .ဆိုပြီး.. နေရာ ပေးတယ်ပေါ့ ဒီတော့.. အမျိုးသမီးကလည်း.. “ကျေးဇူးပဲ” ဆိုပြီး..ဝင်ထိုင်တယ်..
အသားညိုညို အမျိုးသားကလည်း.. သူ့ဟမ်းဘတ်အိတ်ကို..​ရှေ့ဘက်ကို ချပြီး အမျိုးသမီးဘေးမှာ..ရပ်လို့.. ခရီးဆက်ခဲ့ ပြန်သပေါ့ဗျာ.. အယ်.. တအောင့်လောက် ကြာတော့.. ထိုင်နေတဲ့ အမျိုးသမီးက.. သူ့ဘေးက ရပ်နေတဲ့ အမျိုးသားကို လက်ကုတ်ပြီး..တိုးတိုးလေး..ပြောတယ်… ” အစ်ကို အစ်ကို…ဟိုး ​ရှေ့က..ဂတုံးနဲ့ လူကို ကြည့်ကြည့်..” အမျိုးသမီးက ကားရှေ့ခန်းမှာ..မတ်တတ်ရပ်စီးနေတဲ့ ခရီးသည်တွေကြားက ကတုံးဆံပင်နဲ့ လူတစ်ယောက်ကို လက်ညိုးထိုးပြီး..ပြတယ်”. ” ဘာဖြစ်လို့လဲဗျ..”
အစ်ကို သူ့လက်ကို သတိထားကြည့်ကြည့်။ ကားဘရိတ်အုပ်လိုက်တိုင်း.သူ့လက်က ဘေးက အမျိုးသမီးရဲ့ အိတ်ကို သွားသွားကိုင်နေတာ” “ဪ..ဟုတ်လား..” သူ..ပြောတာနဲ့.. ကျတော်တို့လည်း.. သတိထား ကြည့်မိတော့… ဟုတ်တယ်ဗျ.. ကတုံးဆံပင်နဲ့ ပိန်ပိန်ပါးပါး အမျိုးသားတစ်ယောက်က.. ကားရပ်လိုက်တိုင်း.. ဘေးက အမျိုးသမီးရဲ့အိတ်ကို သွားသွား ကိုင်နေတာ.. အတော်တော့..မသင်္ကါစရာ ကောင်းတာဗျ… ဒီတော့ အသားညိုနဲ့လူက ပြောတယ် ”
အမျိုးသမီးကို..သွား သတိပေးရင် ကောင်းမယ် ထင်တယ်နော်..” ဒါကို ထိုင်နေတဲ့အမျိုးသမီးက.. ” ဟာ..အစ်ကို..အဲ့လို သွားပြောလို့..ဘယ်ရမလဲ ။ ကျမတို့က ထင်ကြေးနဲ့ ပြောနေတာလေ ။ တကယ့်လို့ အဲ့အမျိုးသမီးက သတိထား ​ရှောင်သွားလည်း..သူက နောက်တစ်ယောက်ဆီ ကပ်မှာပဲလေ ။ ဒီတော့ ကျမတို့ သတိထား စောင့်ကြည့်ပြီး လက်ပူးလက်ကြပ် ဖမ်းရမှာ” အင်း.. သူ ​ပြောတာလည်း ဟုတ်သားဗျ။
ဘာမှန်းညာမှန်း မသိ။ သွားပြောလို့..ဘယ်ဖြစ်မလဲ.. တော်ကြာ.. လင်မယား ဖြစ်နေရင်..မခက်လား..။.. ဒီတော့လည်း.. အမျိုးသမီး အကြံပေးတဲ့အတိုင်း.. ကျတော်တို့ သုံးယောက်.. အဲ့ကတုံးနဲ့လူကို မသိမသာ..လှမ်းလှမ်း ကြည့်ပြီး.. ခရီးဆက်ခဲ့ပြန်သပေါ့ဗျာ.. အဲ.. ဒါပေမဲ့.. အဲ့ကတုံးနဲ့လူက.. အခွင့် မသာလို့ပဲလားတော့.. မသိဘူး.. လက်ကသာ..အိတ်ကို သွားသွား ကိုင်နေတာ.. နှိုက်ယူတာလည်း..မတွေ့ဘူးဗျ.. ဒီလိုနဲ့ ခရီးဆက်လာရင်း.. မှတ်တိုင် တစ်ခု ရောက်တော့.. ထိုင်နေတဲ့အမျိုးသမီးက.. ”
ကျမတော့ ဆင်းတော့မယ်..အစ်ကိုရေ” လို့.. ပြောပြီး ထိုင်ခုံက ထလို့ ဆင်းသွားတယ်ဗျ.. အဲ့တော့.. သူ့နေရာကို.. အသားညိုတဲ့အမျိုးသားက.. ဝင်ထိုင်တယ်.. ကျုပ်ကတော့.. ကံမကောင်းစွာနဲ့ပဲ.. မတ်တတ်ရပ်မြဲပေါ့ဗျာ.. ဟို ကတုံးကိုတော့.. နှစ်ယောက်သား..အကြည့်က.. ခွာ မရသေးဘူးဗျ.. ဒါပေမဲ့လည်း.. အဲ့ကတုံးက… ဘာမှ.. နှိုက်တာ ပြုတာ..မတွေ့ပဲ.. နောက် တစ်မှတ်တိုင်..ရောက်တော့.. ဆင်းသွားပြန်ရော ဒါနဲ့ ကျတော်လည်း.. စိတ်အေး သွားပြီး.. သက်ပြင်း ချရုံ..ရှိသေးတယ်. ” ဟာ သွားပြီ ။ ပါသွားပြီ။
လုပ်ကြပါအုံးဗျာ” အသံက.. ထိုင်နေတဲ့ အမျိုးသားရဲ့ အသံ..။ ဒီတော့.. ကျတော်က..မေးလိုက်တယ် ” ဘာ ပါသွားတုန်းဗျ ” ” ကျတော် ကျတော့်ပိုက်ဆံ.. တစ်သောင်းတန်အုပ်..ပါသွားပြီ..” ” ဟင်..’ ” အခုမှ..ဘဏ်က..ထုတ်လာတာဗျာ ။ ဒီမှာ..ကြည့်အုံး။ အိတ်ကို ခွဲပြီး ယူသွားတာဗျာ” “ဟာ” ဟမ်းဘတ်အိတ်က.. ဘေးက..ကွဲလို့.. ” သွားပါပြီဗျာ ။ လုပ်ကြပါအုံး။ ကူညီကြပါအုံးဗျာ.. ငိုမဲ့မဲ့ ဖြစ်နေတဲ့ အမျိုးသားရဲ့မျက်နာ..။ ဒီတော့ ကျတော်က ” မရတော့ဘူး ထင်တယ်​ဗျ။ ကျတော်..ထင်တာ မမှားရင်” ” ဟင်” ကျတော့်စကားကြောင့် သူ..တစ်စုံတစ်ခုကို သတိရသွားရင်း နှစ်ယောက်သား.. ရေရွတ်လိုက်မိတာက.. ” ဟို…မိန်းမ…” ဟုတ်ပါတယ်.. တကယ့်ကို..ပိပိရိရိ..ပိုင်ပိုင်နိုင်နိုင်.. ပိုက်ဆံ ပါမှန်း..သိလို့.. နောက်ကနေ..ကပ်လိုက်လာပြီး.. အာရုံကို..လှည့်စား.. ထိုင်ခုံမှာ..စမတ်ကျကျ.. ထိုင်လို့ သာသာယာယာပဲ.. နှိုက်သွားခဲ့တာပါပဲဗျာ။ အားလုံးပဲ သတိထား ဆင်ခြင်နိုင်ဖို့.. ရေးသား တင်ပြလိုက်ရပါတယ်
ပြည်ပ ထုတ်ကုန်ထက် ပြည်တွင်းထုတ်လုပ်မှု ကို ပိုအားပေးသွားမည်ဟု ဆို
စကစ အတွက် ရှေ့ဆက်ဘယ်လိုမှ မဖြစ်နိုင် . . .အမေရိကန် လက်မ ခံရင် ဘယ်သူ အုပ်ချုပ် လို့ ရ မလဲ.???